iElegance? Vhiki rekutanga rekuenda kwangu kuMacBook Pro | Martech Zone
iElegance? Vhiki rekutanga rekuenda kwangu kuMacBook Pro
Svondo, October 29, 2006 Douglas Karr
Parizvino, iwe watove wakazara neMac vs. PC kushambadzira:
Ichokwadi ndechekuti ini handina chokwadi chekuti vanorovera kuti chii icho vanoshandisa Mac vanonakidzwa. Pasina kupokana ese eLife, iMovie, iTunes, nezvimwewo zvakanaka kushandisa. Zvakare, hazvishamise kuti vanhu vekugadzira vanofarira kushandisa Mac. Zvimwe zvacho zvinogona kuve kuti vanhu vakaita seAdobe uye zvirongwa zvakaita seQuark vakatanga kwavo paMac.
Chinhu icho chandinotenda kuti Apple chinoshayikwa kubva kushambadziro uku kunaka kweyeye mushandisi interface. Kunyangwe Windows yakashanduka uye ichinyatsoteedzera akawanda emaitiro eApple, ivo vachiri vasati vabate nyore nyore kushandiswa.
Ndiri kuzoratidza zera rangu pano, asi ini ndakatanga muindasitiri iyi nekugadzira manera manera muProcammable Logic Controllers (PLCs), ndokuendeswa kuDOS, kwakabatanidzwa PLCs kuDOS, uye kwakagadziriswa, kwakabatanidzwa uye kwakashandiswa zvinoshandiswa paMicrosoft Windows, IBM OS2 Warp / Warp Server, nezvimwewo. Izvo hazvina kumbobvira zvakareruka, asi ini ndagara ndichizvipokana pakuverenga uye kuyedza kuita michina nekubatanidza zvakanyanya. Ndine ruzivo rwakawanda, uye ungati ndiri 'Microsoft Guy', ndarishandisa sechinhu changu chekutanga mumabasa angu basa rangu rese.
OSX (Mac Inoshanda Sisitimu), haina kuzara, isinganetsi kushandisa, nyore kushandisa, kugadzirisa, kubatanidza, nezvimwe. Kukuudza chokwadi, imwe yenguva dzinonakidza kwazvo dzandaive nadzo ndepandaitadza kuziva kuti ndoisa sei chirongwa. Ini handina kuziva kuti ini ndaigona kungozvidhonza kuApplication yangu folda. Haudi here kuti zvive nyore paWindows? Sheesh.
Kana zviri zvekudyidzana pabasa (isu tiri chitoro cheMicrosoft), ini handina kana matambudziko. Hapana matambudziko ekupinda pane network, kuwana isina waya, kushandisa Hofisi uye kutumira uye kugovana mafaera. Zvave zvisingarwadzi. Ndine zvakafanana zvinomhanya 'kungangoitika' ini ndoda kumhanya XP… asi ini ndinoiburitsa kunze kweWindow paMac (zvinotyisa). Ikoko ndine Microsoft Access uye Microsoft Visio.
Saka… izwi rangu rekutanga rinofanira kunge riri Elegance. Apple inoita basa rakanakisa pane yakanaka, yakapusa interface inomhanya chaizvo. Kana ndachinja kubva paPC kuenda kuPC munguva yakapfuura, zvakatendeka zvakatora nguva yakawanda kupfuura yainofanira kuchinjira kuMac. Ndafadzwa.
Iyo 7 Maitiro eKubudirira Webhu 2.0 Kunyorera
Gumiguru 30, 2006 pa 5:42 AM
Kugamuchirwa kune inoshamisa nyika yeMac 🙂
Ndakave nekutanga Mac kuratidzwa mukutanga 80s, pandakaona demo raisimbisa chokwadi chekuti maMac aive nehushamwari (semu "Ndokumbirawo isa dhisiki" kupesana ne "insert disk"). Pandakapedza gore muUS muna 1986, shool yaingova neMacs chete. Vakanga vari nyore kushamwaridzana, uye chii chinofadza kuita mifananidzo (nhasi, mumwe angadana kuti "girafu"). Kwemamwe makore ndakashanda nemaPC, zvakanyanya nechikonzero chekuti semudzidzi munhu aisakwanisa kutenga Mac panguva iyoyo. Ipapo zvakare ndaive neMac yakanaka (5200), yaive yakatangira, kunyangwe isina-yakabudirira, yeMac. Ipapo zvakare, apo Windows XP yakabuda, ndakaedzwa kutenga Sony Laptop. Kwete chete iyo tech tsigiro yakayamwa, panguva iyoyo ndakatanga kuita mari nevhidhiyo, uye nekuita re-boot PC yako awa yega nemutengi akagara padivi pako, chaive chisiri chiitiko chakanaka. Saka takasvetukira paFinal Cut bandwaggon, yatova ne1.25 vhezheni. Handina kumbozvidemba. Nhasi tiri 2 muhofisi, uye tine 5 Macs; zvese kubva kudiki Mac mini, yekare G4 tower (iwe unogona kufungidzira PC yemakore manomwe ichiri kutaridzika zvakanaka, uye ichiri kushanda?) kusvika kuG7 ine 5 processors.
Pazasi mutsetse: Mac anogona kudhura zvakanyanya muchikamu chekutanga, asi anochengetedza zvakanyanya mumitengo yekugadzira, anonakidza kushanda nawo, akachengeteka kubva kuhutachiona. Vanongoshanda chete.